बिज्ञान प्रबिधि – NepalajaMedia
स्कूलका दिनहरुमा हामीलाई भनिने गरिन्थ्यो कि, ‘जुन सुकै कुरामा यदि प्रकाश पर्छ भने त्यसको पछाडि छायाँ बन्छ’। चाहे त्यो पेन्सिल होस् वा पेन, पुस्तक होस् वा कुर्सी, वा हामी आफै नै किन नहोस्। हरेक कुराको आफ्नै छायाँ हुने गर्छ। यदि हामी पनि कुनै बत्ति अथवा आगो बालेको ठाउँमा गयौ भने हाम्रो पनि छायाँ देखा पर्छ। सलाईको काँटीको पनि छायाँ हुन्छ तर त्यसमा आगो बाल्यौ भने काँटीको छायाँ त जस्तोका त्यस्तै हुन्छ तर आगोको छायाँ भने देखिदैन। के तपाईहरुले कहिले सोच्नु भएको छ, आखिर आगोको किन कुनै छायाँ हुदैन? यसको पछाडि के कारण छ? तपाई आफ्नो घरको बत्ति बाल्नुहुन्छ र मैनबत्ती पनि जलाउनुहुन्छ। त्यसपछि यसको छाया अर्को पट्टि हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईले मैनबत्तीको छाया त देख्नुहुनेछ, तर मैनबत्तीमा बलेको आगोको छायाँ भने देख्न सक्नुहुन्न। यस बिषयमा विज्ञानले निकै चाखलाग्दो जवाफ दिएको छ। सलाई र
एजेन्सी- आज हामी तपाईलाई यो आधुनिक युगको एउटा अनौठो रहस्यको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । सपनालाई ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने खबर सुन्दा तपाईलाई अचम्म त लाग्यो नै होला । तर वैज्ञानिकहरुले सपनालाई ह्याक गर्ने डिभाइस बनाएका छन् । उक्त डिभाइसबाट अब कसैका पनि सपना ह्याक गर्न सकिने भएको छ । साथै डिभाइसको माध्यमबाटै सपनालाई कन्ट्रोल गर्न पनि सकिने भएको छ । एमआईटी वैज्ञानिकहरु यस टेक्नोलोजिमा काम गरिरहेका छन् । उक्त डिभाइरसबाट सपना ह्याक गर्नका साथै सपनालाई बदल्न पनि सकिने छ । केहि वैज्ञानिकहरुले भने निदाएको बेला देखिने सपनाले जीवनमा केहि असर नपर्ने बताएका छन् । सन् २०१७ मा लञ्च भएको एमआईटीको ड्रिम ल्याबको ओपिनियन भने फरक रहेको छ । वैज्ञानिकहरुले निदाएको बेला देखिने सपनाले वास्तविक जीवनमा पनि असर पर्ने बताएका थिए । ड्रिम ल्याब रिसर्चर एडम होरोविट्ज, मानिसहरु आफ्नो जीवनको एक तिहाई समयमा आफूले आफ